Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda - solosaina tokana
Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda - solosaina fampiasam-bola tokana
Ny Vondron-tsangana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola (CIU) dia manome soso-kevitra amin'ny kabinetra ho fankatoavana orinasa, na efa misy na atolotra ho an'ny tanjon'ny fampiasam-bola amin'ny raharaham-barotra eo ambanin'ny Programme Citizenship by Investment.
Ireo safidy roa momba ny fampiasam-bola roa dia:
Ny mpangataka voalohany, ho an'ny tenany manokana, dia manao fampiasam-bola amin'ny orinasa ankatoavina sahabo ho $ 1,500,000
Olona ambany indrindra amin'ny roa hanao fampiasam-bola miaraka amin'ny orinasa nankatoavina sahabo ho $ 2 $ farafaharatsiny. Ny olona tsirairay dia takiana amin'ny vola 5,000,000 400,000 dolara amin'ny farafahakeliny. Ny fangatahana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola dia azo apetraka amin'ny azy na amin'ny alalàn'ny mpiasa iray.
Raha vao nomena ny fankatoavana ny fampiasam-bola ho an'ny orinasam-bola dia handinika ireo fangatahana zom-pirenena ny CIU. Ny dingan'ny fampiharana dia mitovy amin'ny NDF, izany hoe, rehefa ampiharina ny fangatahana dia angatahina ianao handoa ny saram-pahavitrihana ilaina sy ny 10% amin'ny saram-panodinana amin'ny governemanta. Rehefa nahazo taratasy fankatoavana ianao dia angatahina handoa ny fandanjalanjana ny fanodinana ny governemanta sy ny haben'ny fampiasam-bolanao mandritra ny 30 andro. Noho ny toetran'ny fampiasam-bola toa izany dia misy fifanarahana escrow eo anelanelan'ireo antoko kanefa ny famindrana ny vola miditra dia tsy maintsy atao ao anatin'ny 30 andro manomboka amin'ny famoahana taratasy fankatoavana.
Vantany vao voaray, ny taratasy fangatahana fisoratana anarana dia havoaka ho an'ny mpangataka voalohany sy ny fianakaviany izay alefa any amin'ny biraon'ny pasipaoro miaraka amin'ny fangatahan'izy ireo sy ny antontan-taratasy miaraka.
Ny mpandraharaha / solontena nomenao dia hanoro anao ny daty misy amin'ny:
Tsidiho Antigua sy Barbuda haka ny pasipaoronao ary hanao fianianana na fanamafisana ny tsy fivadihanao.